कहाँबाट चुनाव लड्ने तयारी गर्दैछन् शीर्ष नेता ? – Himalaya TV
कहाँबाट चुनाव लड्ने तयारी गर्दैछन् शीर्ष नेता ?
२७ भाद्र २०७४, मंगलवार ०७:५४
काठमाण्डौ,२७ भदाै । कांग्रेस शीर्ष नेताले पुराना क्षेत्र नछाड्ने
-डडेल्धुरा नछाड्ने पक्षमा देउवा
प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अहिलेसम्मका सबै निर्वाचन डडेल्धुराबाट लड्दै आएका छन् । उनी २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा डडेल्धुरा र कैलाली ६ बाट विजयी बने । उपचुनावका लागि देउवाले कैलाली ६ छोडेर डडेल्धुरा नै रोजे । एक ठाउँबाट मात्र निर्वाचन लड्न पाउने हुँदा उनले फेरि पनि डडेल्धुरा नै रोज्ने मनस्थिति बनाएका छन्।
-तनहुँमा पौडेल तानातानमा
कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले २०४८ सालयता तनहुँबाटै निर्वाचन जित्दै आएका छन् । तीनबाट दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र हुने क्रममा क्षेत्र नम्बर आधा–आधा भाग १ र २ परेपछि पौडेललाई दुवैतिरबाट लड्न माग भएको उनका स्वकीय सचिव चिरञ्जीवी अधिकारीले जानकारी दिए ।
-महामन्त्री शंशाक पुरानै ठाउँमा लड्दै
क्षेत्र निर्धारण गर्दा नवलपरासीलाई दुईवटा जिल्ला बनाइएको छ । कांग्रेस महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले २०६४ र २०७० सालको संधिानसभा निर्वाचनमा जितेको नवलपरासी १ बाटै फेरि पनि निर्वाचन लड्ने तयारी गरेका छन् ।
-कोषाध्यक्ष पनि पुरानै क्षेत्रमा
कांग्रेस कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव सिरहा ३ बाट निर्वाचन लड्ने तयारीमा छिन् । ‘केही गाउँपालिका र नगरपालिका हेरफेर भए पनि ३ नम्बरबाटै निर्वाचन लड्ने तयारीमा छु,’ उनले भनिन् ।
-अधिकांश प्रभावशाली नेता पुरानै क्षेत्रबाट लड्ने पक्षमा
-प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्ने क्षेत्र रोज्दै एमाले शीर्ष नेता
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले झापा ५ बाट संघीय संसद्को निर्वाचन लड्ने मनस्थिति बनाएका छन् । ओलीको गृहनगर दमक पनि यही क्षेत्रमा पर्छ । गौरादह, लखनपुर, तोपगाछी, गौरीगन्जजस्ता नगरपालिका र गाउँपालिका पर्ने ती क्षेत्र एमालेको ‘पकेट क्षेत्र’ मानिन्छन्।
– माधवकुमार नेपाल
नेता माधवकुमार नेपालले काठमाडौं र रौतहटका तीनवटा क्षेत्रमध्ये एउटा क्षेत्रबाट निर्वाचन लड्ने तयारी गरिरहेका छन् । तीनवटै क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने दबाब रहेकाले उनले कुनै निर्णय लिइसकेका छैनन् । ‘काठमाडौं–२, रौतहट ४ र १ मध्ये एउटा क्षेत्रबाट निर्वाचन लड्ने उहाँको तयारी छ,’नेपालका स्वकीय सचिव मोहन गौतमले भने, ‘अब छिट्टै निर्णय लिनुहुनेछ।’ नेपालको गृहनगर गौर रौतहट १ मा पर्छ ।
उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले बर्दिया र प्युठानमध्ये एक ठाउँबाट निर्वाचन लड्ने तयारी गरेका छन् । दुवै जिल्लाका नेता–कार्यकर्ताको तीव्र दबाब रहेकाले आफूले तत्काल निर्णय नलिएको गौतमको भनाइ छ । ‘दुईमध्ये एउटा जिल्लाबाट लड्छु, मैले निर्वाचन लडेँ भने दुवै जिल्लाको १ नम्बर क्षेत्रबाटै लड्छु, ’ गौतमले भने ।’
-पदाधिकारीहरूको रोजाइ पुरानै क्षेत्रमा
-माओवादी नेता गृहजिल्लाबाट
-नारायणकाजी श्रेष्ठ गोरखा
-रामबहादुर थापा पनि चितवनबाटै
-कृष्णबहादुर महरा दाङ वा रोल्पा
-वर्षमान पुन रोल्पाबाट
-जनार्दन शर्मा पश्चिम रुकुमबाट
-टोपबहादुर रायमाझी अर्घाखाँचीबाट
नेता टोपबहादुर रायमाझी अर्घाखाँचीबाट निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा छन् । यसअघि अर्घाखाँची जिल्लामा दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र थिए । अहिले एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र छ ।
-पम्फा भुसाल ललितपुरबाट
माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले ललितपुर–३ बाट निर्वाचनमा उठ्ने तयारी गरेकी छन् । उनी यसअघि पनि ललितपुरबाटै निर्वाचन लड्दै आएकी छन् । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा भुसाल ललितपुर ३ बाट निर्वाचित भएकी थिइन् । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीमा आबद्ध उनले निर्वाचन लड्न पाइनन् । याे खबर नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
विश्वकप २०१८: अाज २ समूहका ४ खेल हुने
एसर्इर्इको नतिजा प्रकाशनमा सरकारले लापरबाही गरेको आरोप
प्रम अोलीद्वारा चीन भ्रमणबारे राष्ट्रपतिसमक्ष जानकारी